कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री सपना – Online National Network
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री सपना
२६ कार्तिक २०७४, आईतवार ०२:५३
काठमाडौं, २६ कात्तिक – दमौली बजारको केन्द्रमा चार तलाको घर छ । त्यही घरको छतमा शनिबार बिहान कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल चुनावी प्रचारमा निस्कने हतारोमा थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार ताप्लेजुङको चुनावी सभामा जान पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । तर, आफ्नो क्षेत्रको कार्यक्रम छुटाउन सक्दिनँ भन्दै उनले देउवाको अनुरोध अस्वीकार गरे । र, व्यास नगरपालिकामा मत माग्न हिँडे ।
त्यसमाथि ‘पटकपटक एउटै व्यक्ति उम्मेदवार किन ?’ भन्ने प्रश्न पनि झेल्नुपरेको छ । पाँचपटक तनहुँबाट सांसद भइसकेका पौडेल यी चुनौतीका बीच छैटौंपल्ट किन उम्मेदवार बनेका छन् त ? प्रश्नको जवाफ उनले घुमाउरो शैलीमा दिए । जवाफभित्र उनको स्पष्ट संकेत थियो– प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना ।
०४८ सालमा तनहुँ १ बाट चुनाव जितेका पौडेल त्यसयताका चारवटा निर्वाचनमा तनहुँ २ बाट सांसद निर्वाचित भए । निर्वाचन क्षेत्र पुनस्संरचनापछि तनहुँका ३ निर्वाचन क्षेत्र घटेर २ वटा भए ।
यसपटक उनी तनहुँ १ बाट उम्मेदवार छन् । यसपालि निर्वाचित भए आफ्नो मिसन पूरा गर्न सफल हुने ठानेका छन् उनले । त्यसैले युवा पुस्तालाई अवसर नदिएको भन्ने आक्रोशलाई उनले ‘भावी अवसर’ को आश्वासन दिँदै थुमथुम्याइरहेका छन् ।
‘राजनीतिमा संन्यास भन्ने हुँदैन तर एकरदुई वर्ष समय पाएँ भने मेरो उद्देश्य पूरा हुन्छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘त्यसपछि नयाँ व्यक्तिहरूका लागि अवसर आइहाल्छ, अहिले पनि म उहाँहरूकै प्रतिनिधिका रूपमा उभिएको छु ।’
पौडेलमाथि पहिलो तगारो पार्टीभित्रैबाट तेर्सिएको छ । सुरुमा उनलाई उम्मेदवार नै बन्न नदिन पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले जुलुसै निकाले । त्यसरी रोक्न नसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए ।
जोशीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि पौडेललाई केही सहज त भयो तर आयोगको निर्णय पौडेलकै दबाबमा भएको भन्दै जोशी पक्ष आक्रोशित छ । उम्मेदवारी नै खारेज भएपछि जोशीले खुला रूपमा त केही भनेका छैनन् । तर, जोशीप्रति सहानुभूति राख्नेहरू अझै पौडेलको पक्षमा उभिएका छैनन् ।
‘झन्डै ३० वर्षदेखि उहाँले तनहुँमा एकछत्र शासन गर्दै आउनुभएको छ, २र४ जनाको घेरामा मात्र बस्नुभएको छ,,’ शनिबार पौडेलकै चुनावी कार्यक्रमनजिक भेटिएका जोशी पक्षका अगुवा कार्यकर्ता नरनाथ काफ्लेले भने, ‘सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुभएन भने अहिले उहाँले राम्रो पाठ सिक्नुहुनेछ ।’ राष्ट्रिय नेता भए पनि पौडेलले जिल्लामा केही गर्न नसकेको र पार्टीभित्रको सबै पक्षलाई नमिलाएको आक्रोश जोशी पक्षको छ ।
मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा पौडेलले जोशी पक्षका कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पारेर आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । जोशी पक्षको असन्तुष्टि पौडेलले राम्ररी बुझेका छन् । जोशीको असन्तुष्टिले कति असर गर्छ त ? ‘उम्मेदवारी रद्द भएको छ अबै केही मिलाउनुपर्ने कुरा छन् भने त्यसका लागि मैले पहल गरिरहेको छु,’ पौडेलले भने ।
पौडेल उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, गृह, सञ्चार, कृषि, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री भइसकेका छन् । पार्टीभित्र संसदीय दलका नेता र उपसभापति पनि भइसकेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति पदमा भने पराजय बेहोरेका छन् ।
उनले जोशी पक्षका कांग्रेस कार्यकर्ताको सहानुभूति आफूप्रति रहेको सुनाए । जोशी आफैंले सहयोगको वचन त दिएका छैनन् तर उनको पक्षको मत आफूलाई आउनेमा श्रेष्ठ ढुक्क छन् ।
‘झन्डै ३० वर्षदेखि एउटै व्यक्ति हुनुहन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले अन्य के–के आश्वासन दिँदै चुनाव जित्नुभएको छ तर जितेर गएपछि केही गर्न सक्नुभएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले यसपटक जनताले परिवर्तन खोजेका छन् ।
कांग्रेसकै मतदाता पनि वाक्क छन् ।’ गत स्थानीय तहको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको मत जोडदा कांग्रेसको भन्दा १ हजार ७ सयले बढी छ । यसपटक पौडेलको किल्ला तोड्न सकिने विश्वास वामपन्थी गठबन्धनमा छ ।
तनहुँ १ मा भानु, आँबुखैरेनी, देवघाट र व्यास नगरपालिकाका १२ वटा वडा पर्छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा बन्दीपुर माओवादी केन्द्रले जित्दा कांग्रेस कार्यकर्ताभित्रैको असन्तुष्टिले उम्मेदवारलाई सहयोग भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
देवघाटमा निकै थोरै मतान्तरले प्रमुख एमाले र उपप्रमुख कांग्रेसले जितेको थियो । सदरमुकाम दमौली रहेको व्यास नगरको एउटाबाहेक सबै वडा कांग्रेसले जितेको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र पुनस्संरचनापछि पहिलेकै आकारभन्दा १ र २ नम्बर क्षेत्रका ठाउँ फरक र केही विस्तारित भएका छन् । कांग्रेस कमजोर नभए पनि पार्टीभित्रैको असन्तुष्टि पौडेलका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । — कान्तिपुर दैनिक